20ka Casharrada Laravel ee ugu Wanaagsan (Khayraadka Lacag-La'aanta iyo Lacag-bixinta ah ee 2021) | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/20ka Waxbarasho ee ugu Wacan
20ka Waxbarasho ee ugu Wacan
0 Daqiiqado 23 ayaa akhriyay
Laravel waxa uu ahaa xidigta dhagaxa ah ee horumarinta codsiga PHP sanado badan iyo sabab wanaagsan. Nidaam deegaan oo baaxad leh, bulsho firfircoon, suuq shaqo oo xoog leh, bilow guul leh - waxay haysataa wax kasta oo ka dhigaya mid mudan in la qaato tignoolajiyad cusub.
Haddii aad rabto inaad barato Laravel, uma baahnid inaad sii socoto. Markaad dhex dhex gasho hagahan, waxaad ka heli kartaa casharka Laravel ugu fiican adiga, oo ku habboon heerkaaga aqooneed iyo qaabka waxbarasho.
Diyaar? Aan sii qoto dheerayno!
Maxaad u baran Laravel
Waxaa jira sababo badan oo aad u rabto inaad barato Laravel, markaa waxaan ku bilaabaynaa kuwa ugu muhiimsan. Intaa waxaa dheer, waxaan sidoo kale mari doonaa qaar ka mid ah talooyin ku saabsan sida ugu hufan ee loo barto qaabka ka hor inta aan la eegin casharrada Laravel ee ugu fiican si faahfaahsan, oo ay ku jiraan faa'iidooyinka, khasaarooyinka, iyo isticmaalka kiisaska cashar kasta.
1. Horumar degdeg ah
Laravel waa il furan qaab dhismeedka PHP ee horumarinta codsiga webka, oo ku salaysan MVC (Model-View-Controller) qaabka qaab dhismeedka. Syntaxdeeda qeexan oo toosan waxay dedejisaa horumarka waxayna keentaa codebase nadiif ah oo la ilaalin karo iyo codsiyo la cabbiri karo.
2. Caannimo Sare
Koodhka isha Laravel waxa lagu marti galiyay GitHub halkaas oo ah kaydka ugu caansan PHP, oo leh in ka badan 60,000 oo xidigood lana tirinaayo. Waxa kale oo jira casharo badan oo Laravel ah, fiidiyowyo, shaashado, iyo agab laga heli karo onlayn kuwaas oo kaa caawin kara inaad barato qaabka iyo inaad la socoto horumarka cusub.
3. Nidaamka deegaanka ee weyn
Waad ku mahadsan tahay caannimadeeda, Laravel waxay leedahay nidaam deegaan oo baaxad leh oo labadaba baakadaha rasmiga ah iyo kuwa saddexaad oo aad ku dari karto codsigaaga. Xirmooyinka rasmiga ah waxaa ka mid ah agabka maamulka server-ka iyo goobaha, deegaanka horumariyaha, la socodka iyo agabka tijaabinta, guddi maamulka, iyo in ka badan (ka eeg bogga hoyga Laravel ee hoos imanaya menu 'Ecosystem').
Haddii aad rabto inaad ku darto shaqeyn aan weli jirin, waxaad sidoo kale horumarin kartaa xirmo Laravel kuu gaar ah.
4. Bulshada Firfircoon
Waxaa jira jaaliyad aad u weyn oo agagaarka Laravel ah oo aad ka heli karto Laravel.io, Laracasts Discuss, LaraChat, Discord, Reddit, iyo meelo kale oo fiican. Laravel waxa kale oo uu leeyahay shir rasmi ah oo lagu magacaabo Laracon kaas oo sannad walba ka dhaca saddex qaaradood (America, Europe, Australia).
5. Suuq Shaqo oo Xoogan
Horumarinta Laravel waa xirfad aad loo baahan yahay iyo rajada shaqadu waa mid aad u wanaagsan. Waxay leedahay guddi shaqo oo rasmi ah oo loo yaqaan Larajobs halkaas oo cinwaannada ugu caansan ee shaqada ay yihiin 'Horumarinta Laravel', 'Developer Laravel Backend', 'Full-Stack PHP Developer' (Laravel waxa badanaa lagu lammaaniyaa Vue.js xagga hore), iyo 'DHEER Developer Stack' (TALL waxay u taagan tahay Tailwind CSS, Alpine.js, Laravel, iyo Livewire).
Larajobs ka sokow, waxaad ka heli kartaa shaqooyin badan oo Laravel ah goobaha kale ee shaqada sida Monster, Indeed, iyo LinkedIn, iyo shaqooyinka fogfog ee Laravel ayaa sidoo kale laga heli karaa RemoteOK, Waxaan ka shaqaynaa fog, iyo meelo kale.
6. Fursado ganacsi oo rajo leh
Haddii aadan rabin inaad u shaqeyso qof kale laakiin aad dhisto ganacsi adiga kuu gaar ah, Laravel wuxuu sidoo kale kuu noqon karaa xal aad u fiican. Waxa horeba u jiray ganacsiyo badan oo guulaystay oo lagu dhisay Laravel, sida OctoberCMS, Mailcoach, Monica CRM, Invoice Ninja, iyo CodeCourse (hoos ka eeg maqaalkan, oo ka mid ah casharrada Laravel ee la bixiyo), si aad u magacawdo dhowr.
Laravel oo aasaas u ah oo isticmaalaya hababka ugu fiican iyo martigelinta PHP ee waxqabadka sare leh, app-kaagu wuxuu cabbiri doonaa wax soo saarka iyada oo aan wax dhibaato ah la kulmin.
Iyada oo leh bulsho firfircoon iyo suuq shaqo oo xooggan, Laravel waa xiddigga dhagaxa weyn ee horumarinta codsiga PHP sabab awgeed. ⭐️ Baro sida loogu bilaabo hagahan si loo helo casharro lacag la'aan iyo lacag la'aan ah. ⬇️Riix halkan Tweet
Sida loo barto Laravel
Si aad u bilowdo barashada horumarka Laravel, waxaad u baahan doontaa xoogaa aqoon hore u jirtay.
Waxaad u baahan doontaa inaad si badbaado leh u isticmaasho PHP, gaar ahaan PHP shayga ku jihaysan. Ogaanshaha sida loo isticmaalo khadka taliska iyo maareeyaha xirmada laxamiistaha sidoo kale waa muhiim - labadan mawduuc waxaa badanaa lagu daboolaa casharrada heerka bilowga ah ee PHP.
Qaar ka mid ah aqoonta HTML iyo nidaamyada maaraynta xogta xogta ee xidhiidhka (Laravel waxa ay taageertaa afar ka mid ah: MySQL, PostgreSQL, SQLite, iyo SQL Server) waxa kale oo ay caawin karaan bilow fudud.
Barashada qaab dhismeedka PHP sida Laravel ayaa xoogaa ka duwan barashada luqadda barnaamijyada sida PHP. Halkan, waxaad samayn doontaa mashruucyo badan oo gacan-ku-tashi ah iyo in ka yar (ama eber) leylisyada barnaamijka bilawga, maadaama tani ay tahay sida inta badan casharrada Laravel ay u habaysan yihiin.
Dhisidda abka-dhabta ah waxa kale oo ay ka dhigan tahay in aad si joogto ah u isticmaali doonto Laravel qayb ka mid ah xidhmooyin. Tusaale ahaan, casharro badan oo Laravel ah ayaa u isticmaala Vue frontend, taas oo macnaheedu yahay inaad sidoo kale u baahan doonto inaad barato Vue.js (badanaa sidoo kale waxaa lagu daboolaa casharo isku mid ah) si loo fuliyo mashruuca.
Sido kale way adagtahay in lahelo casharo loogu talagalay bilawga dhameestiran oo inta badan casharada waa qaab muuqaal ah. Ma jiraan wax buugaag ah oo ku saabsan Laravel inta badan sababtoo ah si dhakhso ah ayey isu beddeshaa taas oo wakhtiga buuggu soo baxayo, qaab-dhismeedku durba laba nooc ayaa ka horreeya.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan marka la dooranayo casharrada Laravel waa u fiirsashada nooca Laravel ee uu daboolayo. Waxaad u baahan doontaa inaad barato sharciyada soo socda ee nooca Laravel:
Tan iyo nooca 6, Laravel iyo xidhmooyinkeeda rasmiga ah waxay raacaan nooca semantic (major.minor.patch), tusaale ahaan 8.* waa sii dayn weyn.
Kahor Laravel 6, qaab-dhismeedka ayaa isticmaalay paradigm.major.minor heshiiska, tusaale ahaan 5.8.* sidoo kale waa sii deyn weyn.
Siideynta weyn ayaa jirta lixdii biloodba mar (Febraayo iyo Ogosto).
Iyo, waxaa jira hal LTS (taageerada muddada-dheer) oo la sii daayo 2dii sanaba mar.
Siideynta guud, hagaajinta cayayaanka waxaa la bixiyaa 6 bilood iyo sii daynta amniga waxaa la bixiyaa 1 sano.
Siideynta LTS, hagaajinta cayayaanka waxaa la bixiyaa 2 sano iyo siideynta amniga waxaa la bixiyaa 3 sano.
Markaa, Laravel siidooyinkiisii ​​waaweynaa ee xigay waxa lagu tiriyey sida 5.5.* (LTS), 5.6.*, 5.7.*, 5.8.*, 6.* (LTS), 7.*, 8.*
Waxa kale oo jira siidaynyo yaryar iyo dhejisyo, laakiin kuma jiraan wax isbeddelo ah.
Maaddaama ay jiraan laba sii dayn oo waaweyn sannad kasta, casharrada si dhib leh ayay ula socon karaan. Inta badan casharrada Laravel waxaad ka heli doontaa taariikh kasta oo la bixiyo waxay noqon doontaa 1-3 nooc oo soo noqda marka la barbar dhigo sii deynta dhabta ah. Tani maaha dhibaato weyn ilaa qaabdhismeedku uu maro qoraal dhammaystiran, kaas oo ugu dambeeyay markii Laravel 4 la sii daayay 2013.
Inkasta oo lagu taliyay in la isticmaalo casharkii ugu dambeeyay ee la heli karo, ha argagixin haddii ay tahay inaad dib ugu noqoto laba ama saddex sii deyn, gaar ahaan haddii ay tahay qayb la taaban karo oo muujinaysa sida loo dhiso nooca codsiga aad rabto inaad barato.
Waxaa laga yaabaa inaad ka hesho xoogaa is-khilaafsan oo u dhexeeya noocyada kala duwan, laakiin kuwan badanaa waxaa xusa qoraaga ama ardayda kale ee qaybta doodda. Sidoo kale waa fikrad wanaagsan inaad ka dhex dhex raadiso qoraalada sii daynta ee sii dayn kasta oo cusub si aad u aragto waxa isbedelay, maadaama ay kaa caawin karto inaad ogaato waxaad fiiro gaar ah u leedahay.
Barashada Laravel haba yaraatee wax qaali ah maaha - xitaa bilaash ayaad ku samayn kartaa. Hagahan waxa ka mid ah casharrada Laravel ee lacag la'aanta ah iyo kuwa la bixiyo labadaba, laakiin xitaa kuwa la bixiyay maaha kuwo aad qaali u ah; waxaad iska qori kartaa goobta casharada qiimaha leh ~15-30 USD/bishii.
Xitaa haddii aadan rabin inaad wax lacag ah ku bixiso barashada Laravel, sidoo kale waa mudan tahay inaad ka dhex gasho qaybta lacagta lagu bixiyo, maadaama qaar ka mid ah goobaha wax-barashada ee premium ay la yimaadaan tijaabooyin bilaash ah, koorasyo ​​fiidiyoow oo bilaash ah oo marmar ah, iyo deeqo kale oo bilaash ah.
Behmaster Waxay kuu ogolaanaysaa inaad ku socodsiiso Laravel alaabtaada, in kasta oo aanay si rasmi ah u taageerin kooxdayada.
6-da Goobood ee Casharka Laravel ee Bilaashka ah ee ugu Fiican
Hadda, aan si dhow u eegno casharrada Laravel ee ugu fiican!
1. Docs Laravel Rasmi ah (Bilow, Dhexdhexaad, Sare)
Warqadaha rasmiga ah ee Laravel
Dukumeentiga rasmiga ah ee Laravel waa sharaxaad xaqiiqo ah oo ku saabsan qaabka Laravel, oo ay ilaaliso bulshada Laravel iyo sidoo kale laga heli karo GitHub. Waxay ku bilaabataa hagaha rakibaadda waxayna bixisaa dulmar guud oo ku saabsan dhammaan fikradaha Laravel, sida qaabaynta, amniga, maamulka xogta, iyo kuwo kale oo badan. Waxaad sidoo kale ka heli kartaa dukumeentiyada xirmooyinka rasmiga ah ee Laravel halkan.
Khayraadka Laravel ee ugu casrisan
aqbaartu waa mid si wanaagsan loo habeeyey oo si sahlan loo baadho
dokumentiyada noocyadii hore ee Laravel sidoo kale waa la heli karaa
waxaa ku jira tusaalooyin kood ah iyo talooyinka ugu wanaagsan ee ku dhaqanka
waxaad ku soo gudbin kartaa warbixinnada cayayaanka GitHub
qalalan, lahjad iyo nakhshad u eg buug-waxbarasheed
Goorta la dooranayo Laravel Docs
Dukumeentiga rasmiga ah ee Laravel ayaa faa'iido leh heer kasta oo aqooneed si loo hubiyo faahfaahinta fikrad kasta oo Laravel la xiriirta. Si kastaba ha ahaatee, waxay noqon kartaa mid aad u adag bilowgayaasha sababtoo ah cufnaanta macluumaadka sare.
Waa meesha ugu fiican ee aad naftaada ku baran karto astaamaha sii daynta cusub ama la barbar dhigo sii daynta kala duwan.
2. Laravel News (Bilow, Dhexdhexaad, Sare)
Laravel News waa goob waxbarid Laravel ah oo loo dhan yahay oo leh wajiyo badan. Waxa ay leedahay baloog soo bandhigaya wararkii ugu dambeeyay ee Laravel, qayb casharrada Laravel ah oo ka hadlaya mawduucyada bilawga ilaa heerka khabiirka, podcast-ka Laravel ee toddobaadlaha ah, iyo warside Laravel oo bixiya subax kasta oo Axad ah. Laravel News waxa kale oo ay soo bandhigtaa baakadaha caanka ah ee Laravel oo wata sharraxaad kooban iyo kood tusaale ah.
si joogto ah loo cusbooneysiiyay
waxay u soo bandhigtaa habab kala duwan (blog, podcast, warside, iwm)
cutubyada dhaqanka ugu fiican
Casharro bilaash ah oo ku saabsan dhisidda apps/hawlaha/qalabka Laravel-dhabta ah
shaashado waxtar leh iyo qaybo kood ah
qaar ka mid ah qoraalada waa qoraalo la kafaalo qaaday (inkastoo si cad loo sheegay)
ay adagtahay in la dhex maro (qaybaha isku xiga ee taxanaha casharada iskuma xidhna midba midka kale)
Goorta la dooranayo Wararka Laravel
Laravel News waa isha ugu fiican ee bilaashka ah ee wararka Laravel la xiriira. Casharradu waa kuwo tayo sare leh oo daboolaya waxyaabo badan oo xiiso leh - laakiin xitaa haddii aadan xiisaynaynin iyaga, waxaa habboon in aad iska diiwaan geliso warsidaha si aad ula socoto qaab dhismeedka Laravel (daabacaad kasta waxaa ku jira liisaska shaqo ee Laravel qaarkood, sidoo kale). Podcast-ka Wararka Laravel ee toddobaadlaha ah sidoo kale waa kheyraad aad u wanaagsan horumariyeyaasha Laravel heer kasta.
3. Tuts Samee (Dhexe, Sare)
Tuts Make waa baloog tabobar caan ah oo daboolaya luqadaha barnaamijyada iyo teknoolojiyadda kala duwan, oo uu ku jiro Laravel. Casharradu waa kuwo kooban oo heer-sare ah, oo ka hadlaya hawlaha guud ee Laravel, khaladaadka, iyo kiisaska isticmaalka. Waxay ku jiraan qaybo badan oo kood ah oo aad sidoo kale ku isticmaali karto mashaariicdaada.
TutsMake waxay leedahay qayb gaar ah oo loogu talagalay su'aalaha iyo jawaabaha wareysiga Laravel, sidoo kale, oo leh sharraxaad toos ah oo feker leh.
casharro ku salaysan ku dhaqanka
tusaalooyin kood dheer laakiin si wanaagsan loo habeeyey
waraysiga shaqada Q&A
casharrada waa ay adagtahay in la baadho (ma jiraan calaamado ama canshuuro kale)
khaladaadka naxwaha halkan iyo halkaas
Goorta la dooranayo Tuts Samee
Tuts Make hubaal maaha kuwa bilawga ah. Waxaad u baahan doontaa ugu yaraan aqoon dhexdhexaad ah oo Laravel ah si aad u fahamto casharradan, maadaama ay yihiin kuwo kood ku salaysan, iyada oo aan laga doodin aragti badan. Casharradu sidoo kale iskuma xidhna - Tuts Make waa baloog, ma aha taxanayaal tabo-talaabo ah oo Taxane ah oo Laravel ah. Haddii aad raadinayso shaqo Laravel, ha moogaanin waraysiga qaybta Q&A; runtii aad bay u fiican tahay.
4. LaraShout (Bilow, Dhexdhexaad, Sare)
LaraShout waa degel tacliin bilaash ah oo diiradda saaraya qaabka Laravel. Casharrada Laravel ee gacan-ku-ku-oolka ah ka sokow, waxa ay sidoo kale soo bandhigtay hagayaal ku saabsan fikrado muhiim ah oo ay ka mid yihiin agabka dhexe, kaydinta, safafka iyo shaqooyinka, iyo kuwa kale. Qaar ka mid ah casharrada waxaa loo qaybiyaa si taxane ah si aad u hesho aqoon qoto dheer oo mawduuc kasta ah.
Hadda, LaraShout waxay leedahay afar taxane: Ururinta, Qaababka Nakhshadda, Horumarinta Codsiga E-commerce, iyo Horumarinta Xidhmada.
si fudud loo maro mareegaha
Casharrada waxay ku bilaabmaan tusmada nuxurka
xog qani ah (sawiro tayo sare leh, tusaalayaal kood, fariimaha digniinta, iwm)
casharro aragti iyo ku-dhaqan ku salaysan labadaba
Qaybaha qaarkood waxa ku jira laba ama saddex cashar oo kaliya
in yar oo la cusbooneysiiyay
Goorta la dooranayo LaraShout
LaraShout waxaa ugu horrayn lagula taliyaa bartayaasha dhexe iyo kuwa sare, in kasta oo ay sidoo kale leedahay casharro heer-bilowga ah. Afarta taxane ee casharrada Laravel ayaa si gaar ah u mudan in la hubiyo - si kastaba ha ahaatee, ogow inaysan daruuri daboolin wax kasta oo aad u baahan tahay, maadaama LaraShout ay ka badan tahay blog-teknooloji marka loo eego goob waxbarasho oo dhamaystiran.
5. Learn2torials (Bilow, Dhexdhexaad)
Learn2torials waa mashruuc hal qof ah oo uu leeyahay Sandip Patel, oo muujinaya casharro bilaash ah oo ku saabsan luuqadaha barnaamijyada iyo qaab-dhismeedka kala duwan. Qaybta casharrada Laravel waxay daboolaysaa dhinacyo badan oo muhiim ah oo qaab-dhismeedka, laga bilaabo rakibaadda ilaa kaydinta ilaa kaydinta.
Waxay diiradda saaraan in ka badan aragtida, laakiin marka ay ku jiraan tusaalayaal kood dheer oo dheer, waxay kaa caawin karaan inaad xalliso dhibaatooyinka dhabta ah ee aduunka, sidoo kale.
casharro si wanagsan loo qoray oo leh sharraxaad maskaxeed
casharrada waxay adeegsadaan qaab su'aal iyo jawaabo fudud oo la raaco
tusaalooyin kood si fiican looga faallooday
casharro badan oo heerka bilowga ah
adag tahay in la raadiyo mareegaha (ma jiraan wax canshuur ah)
Casharrada ma raacaan nidaam macquul ah, laga bilaabo qaybaha bilowga ilaa kuwa horumarsan
Maxaad u dooratay Learn2torials
Haddii aad tahay bilow ama aad horeba u taqaanay horumarka Laravel qaar ka mid ah laakiin ay jiraan daldaloolo xagga aqoontaada ah, Learn2torials ayaa kuu noqon karta kheyraadka Laravel ee kugu habboon. Waxa kale oo ay leedahay duldhacyo badan oo la socda dokumentiyada rasmiga ah ee Laravel, si aad u wada isticmaali kartaan labada agab si aad u xoojiso fahamkaaga fikradaha hoose.
6. Odhaah Tusaale ahaan (Dhexe)
Aftahannimo tusaale ahaan
Erayga Tusaale ahaan waa mashruuc kale oo hal qof ah, oo uu bixiyo Jeff Madsen. Waa taxane tabobar bilaash ah oo Laravel ah oo ku saabsan ORM-ka sareeye, khariidad-xiriirka shayga ka mas'uulka ah wareejinta xogta u dhaxaysa walxaha Laravel iyo xogta macluumaadka xidhiidhka ee ka socda gadaal (MySQL, PostgreSQL, SQLite, ama SQL Server, iyadoo ku xidhan doorashadaada).
Casharrada waxaa loo qaabeeyey sidii duruus xiriir ah waxaana loo akhriyaa sida cutubyada buuga ORM.
casharrada aad bay u qoran yihiin (ku dhawaad ​​sidii sheeko cusub)
degel si fiican loo habeeyay oo leh navigation fudud
tusaalooyin code badan
Qaybaha 'Akhris dheeraad ah' oo leh talooyinka kheyraadka
ma jiro cashar hordhac ah oo lagu sharaxayo fikradaha hoose sida waxa ORM ah
ma jiro taariikhda daabacaadda ee casharrada
Marka la dooranayo aftahannimo tusaale ahaan
Haddii aad hore u lahayd xoogaa aqoon ah Laravel laakiin aad rabto inaad wax ka barato codkarnimada ORM, tani waa agabka Laravel ugu fiican ee aad tagi karto. Taas marka la dhaho, ma cadda goorta la cusbooneysiiyay ee ugu dambeysay laakiin xiriiriyadu waxay tilmaamayaan dukumeentiyada Laravel 5.8, marka waxaa laga yaabaa inay ku jiraan macluumaad duug ah oo ay seegaan ku daris cusub.
Weli, waa hagaha codkarnimo ee ugu dhammaystiran ee aad halkaas ka heli doonto.
6 Fiidiyowyo Casharro Laravel ah oo bilaash ah, Sawir-qaadis, iyo Muuqaallo
1. BitFumes (Bilow, Dhexdhexaad, Sare)
BitFumes waa degel waxbarasho oo soo bandhigaya shaashado lacag-la'aan iyo lacag la'aan ah iyo koorsooyin muuqaal ah oo horumarinta shabakadda ah. Qaybteeda waxbaridda Laravel ee bilaashka ah waxaa ku jira koorsooyin fiidiyoow ah oo tayo sare leh oo inta badan loogu talagalay kuwa bilowga ah, laakiin waxaad sidoo kale ka heli kartaa qaybo kale oo horumarsan halkan, sidoo kale.
Waxa kale oo jira casharro badan oo bilaash ah oo Laravel ah oo ku jira kanaalka BitFumes 'Youtube, oo ay ku jiraan koorso 6.5 saacadood ah oo daboolaysa horumarka Laravel laga bilaabo aasaaska ilaa mawduucyada horumarsan sida Livewire (loo baahan yahay kaydka TALL).
uma baahnid inaad saxiixdo si aad u daawato koorsooyinka bilaashka ah
fiidiyowyadu waxay u habaysan yihiin cutubyo iyo casharro
shaqeynta la socodka horumarka
casharro ku saabsan lamaanaynta qalabka caadiga ah (Laravel with DigitalOcean, VueJS, PHPUnit, iwm.)
koorsooyinka si sax ah ayaa loo calaamadeeyay (dhererka, heerka, tirada casharrada, taariikhda daabacaada)
nidaamka deegaanka oo ay adagtahay in la fahmo (waxaa jira koorsooyin Laravel ah oo bilaash ah labadaba bogga internetka iyo YouTube, waxayna leedahay hal koorso qaali ah)
Goorta la dooranayo BitFumes
Kanaalka Youtube-ka ee BitFumes waa mid mudan in laga dhex baadho xaalad kasta, xitaa haddii aad heer sare marayso. Casharrada bilaashka ah ee ku yaal bogga BitFumes waxay daboolayaan mawduucyo heer-bilowga ah oo badan oo ay adag tahay in meel kale bilaash looga helo. Waxa kale oo ay leedahay hal koorso Laravel oo heersare ah oo ay ku jiraan mowduucyo horumarsan sida is dhexgalka Stripe iyo horumarka ay horseedka ka tahay imtixaan.
2. Ganacsiga Laravel ee Povilas Korop (Bilow, Dhexdhexaad, Sare)
Ganacsiga Laravel waa kanaalada caanka ah ee YouTube oo ay ku jiraan casharro fiidiyoow ah oo bilaash ah oo ku saabsan sida loogu isticmaalo ganacsiga Laravel. Waa mashruuc hal qof leeyahay oo uu sameeyay Povilas Korop oo sidoo kale ah qoraaga Laravel Daily (hoos ka eeg qaybta lacagta la bixiyo).
Kanaalka, wuxuu ku daabacaa dhowr fiidiyow oo YouTube ah usbuuc kasta, isagoo ka hadlaya mowduucyo ay ka mid yihiin Blade, Eloquent, PHPUnit, SaaS codsiyada, iyo kuwo kale oo badan. Casharrada gacanta lagu qaato ka sokow, Povilas waxa kale oo uu sameeyaa isbarbardhigga, waxa uu bixiyaa la-talin shaqo iyo ganacsi, iyo hoosta tabka 'Community', waxa uu la wadaagaa 'caarada Laravel ee maalinta' maalin kasta.
updated ku dhawaad ​​maalin kasta
aad casharro ku salaysan ku dhaqanka
Fiidiyowyo dhaadheer ayaa loo qaybiyaa qaybo yaryar
Talooyinka 'Xiriirka La Xiriira' ee hoos yimaada fiidiyowyada casharrada
Mararka qaarkood wuxuu daawadayaashiisa ugu jawaabaa jawaabaha fiidyaha (eeg tusaale)
muuqaaladu way adagtahay in la raadiyo
Goorta la dooranayo Ganacsiga Laravel
In kasta oo Ganacsiga Laravel uu ugu horrayn loogu talagalay isticmaaleyaasha horumarsan, waxay sidoo kale noqon kartaa kheyraad weyn oo Laravel ah kuwa bilowga ah, gaar ahaan ganacsiga Povilas iyo talada shaqo.
Haddii aad muddo samaynaysay horumarinta Laravel oo aad ka caajistay shaqadaada, kanaalkani wuxuu kaa caawin karaa inaad dib u soo ceshato dhiirigelintaada, maadaama ay ka hadlayso waxyaabo badan oo xiiso leh, muuqaalo cusub, iyo kiisaska isticmaalka gaarka ah oo aanad ka heli doonin meel kale.
3. Laraning (Bilow, Dhexdhexaad)
Magaca Laraning wuxuu ka yimid ereyada 'Laravel' iyo 'waxbarasho', waana run magacan maadaama uu si buuxda ugu heellan yahay barashada Laravel. Waxay ka kooban tahay koorsooyin fiidiyoow ah oo bilaash ah, oo loo kala saaray 'Taxane', 'Features', iyo 'Courses'.
'Taxane' waa casharro fiidiyoow ah oo si dabacsan ugu lammaansan xirmooyinka Laravel iyo mowduucyo kale. 'Features' wali waa ay socdaan waxaana hadda ku jira hal cashar oo fiidiyoow ah oo ku saabsan mishiinka qaabaynta Blade. 'Koorsooyinka' waa taxane tacliin fiidiyow ah oo dhaadheer, sida koorsada 'Laravel from A ilaa Z' oo dhammaystiran oo loogu talagalay ardayda bilowga ah.
koorsooyin si wanaagsan loo habeeyey
tusaaleyaal wax ku ool ah, oo dhab ah
fiidiyowyo HD buuxa
koodka waxa ku jira ayaa laga heli karaa GitHub
ma jiro taariikh daabacan oo muuqaal ah
Goorta la dooranayo Laraning
Maaddaama website-ka Laraning aan weli si buuxda loo dubin, waxaad ka heli doontaa sifooyin maqan halkan iyo halkaas. Tusaale ahaan, badhanka 'Sign In' weli ma shaqaynayo oo taxanayaasha qaarkood waxa ku jira laba qaybood oo fiidiyoow ah oo keliya. Si kastaba ha ahaatee, casharrada horay loo daabacay waa kuwo tayo sare leh oo runtii mudan in la hubiyo, gaar ahaan koorsada Laravel ee A ilaa Z haddii aad hadda bilaabayso qaabka.
4. Laravel PHP Framework tutorial by FreeCodeCamp (Bilow, Dhexdhexaad)
Laravel PHP Framework Tutorial waa koorsada fiidyowga heerka bilowga ah ee FreeCodeCamp ee goobta wax barasho ee khadka ah. In kasta oo qaybta dambe ee manhajka FreeCodeCamp ay xarumo ku leedahay Python, waxay sidoo kale la wadaagtaa fiidiyowyada waxbarasho ee luqadaha kale ee dambe ee kanaalka Youtube, oo ay sameeyeen xubno ka tirsan bulshadeeda isha furan.
Tababarkan Laravel ee Victor Gonzalez wuxuu kugu hagayaa inaad ka dhisto Instagram clone meel xoq ah, oo leh hawlqabadyo ay ka mid yihiin dabagal/la socosho la'aan, tafatirka astaanta, cabbirka sawirada, iyo kuwa kale. Fiidiyowgu wuxuu dhererkiisu yahay 4.5 saacadood, laakiin wuxuu u qaybsan yahay qaybo yaryar si aad si fudud ula socon karto.
mashruuca dhabta ah
sharaxaad qoto dheer
waxaa xisaabiyay FreeCodeCamp
code demo ayaa laga heli karaa GitHub
Xubnaha bulshadu waxay kaa caawiyaan su'aalaha qaybta faallooyinka
oo ku salaysan Laravel 5.8, sidaas darteed waxaa laga yaabaa inay ku jiraan macluumaad duug ah (inkasta oo aad arrimahan ka heli karto qaybta faallooyinka)
Goorta la dooranayo Laravel PHP Framework Tutorial ee FreeCodeCamp
Haddii aad rabto inaad wax ku barato Laravel adiga oo dhisaya kloon ee codsi aad loo jecel yahay, oo adduunka dhabta ah, tani waa mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee lacag la’aan lagu sameeyo. Sharaxaadaha Victor waa kuwo fikir leh oo si fudud loo fahmi karo bulshada FreeCodeCamp aad bay waxtar u leedahay haddii aad arrimaha ku dhex dhacdo.
In kasta oo ay ujeedadeedu tahay kuwa bilawga ah, waxa kale oo laga yaabaa inaad u aragto inay faa'iido leedahay haddii aad hore u leedahay aqoon Laravel laakiin aad rabto inaad barato sida loo dhejiyo codsi u eg Instagram.
5. Aynu ku Dhisno Laravel: A Linktree Clone (Bilow, Dhexdhexaad)
Aynu ku dhisno Laravel: A Linktree Clone
Aynu ku Dhisno Laravel: Linktree Clone waa shaashad Laravel oo si degdeg ah u socota oo ku baraysa sida loo dhiso bogga wax dhisaha warbaahinta bulshada oo la mid ah adeegga caanka ah ee Linktree.
Fiidiyowgu wuxuu dheer yahay 58 daqiiqo oo keliya, maadaama uusan sharxeynin fikradaha aasaasiga ah ama muujinayo sida loo rakibo Laravel, laakiin si toos ah ayuu u socdaa. Casharkan bilaashka ah ee Laravel waxa sameeyay Andrew Schmelyun kaas oo kanaalkiisa YouTube ku haysta dhawr fiidyow oo kale oo Laravel ah kuwaas oo iyaguna mudan in la eego.
Sharaxaada-barta-barta oo aan lahayn qalafsanaan ama kala-jeedin
waxaad ku dhisi kartaa app Laravel shaqeeya in ka yar 1 saac
muuqaalku wuxuu u qaybsan yahay qaybo yaryar
Koodhka isha ayaa laga heli karaa GitHub
tayada maqalku maaha tan ugu fiican
Goorta la dooranayo ' Aynu Ku Dhisno Laravel: A Linktree Clone'
In kasta oo sharraxaadda fiidiyowga ee Youtube ay sheegayso in loogu talagalay bilowga, haddii aad gabi ahaanba ku cusub tahay Laravel, waxaad u baahan tahay inaad maskaxda ku hayso in muuqaalkani uu u maleynayo qaar ka mid ah aqoonta hore u jirtay ee Laravel, sida rakibidda ama qaabeynta bilowga ah.
Tababarkan Laravel wuxuu ku fiicnaan karaa dhisidda abkaaga ugu horreeya oo leh qaab-dhismeedka, laakiin sidoo kale haddii aad rabto inaad horumariso xirfadahaaga horumarinta codsiga.
6. Podcast-ka Laravel (Bilow, Dhexdhexaad, Sare)
Podcast-ka Laravel waa podcast-ka toddobaadlaha ah ee uu marti-geliyo Matt Stauffer, oo muujinaya doodaha Laravel- iyo PHP la xiriira. Dhacdo kastaa waxay xuddun u tahay hal mowduuc, sida xaqiijinta, guuritaanka, khaladka, dejinta deegaanka, iyo kuwa kale. Qaybuhu waxay socdaan ilaa 1.5 saacadood, oo waxaad ku dhagaysan kartaa iyaga adoo isticmaalaya podcast-ka ku dhex jira ama Apple Podcasts.
Dhacdooyinka si wanaagsan ayaa loo diiwaan geliyay (koob, qoraalo, talooyinka isku xirka)
qoraalada waa la heli karaa
maqal tayo sare leh
Qaybaha lama soo dejisan karo
Goorta la dooranayo Podcast-ka Laravel
In kasta oo podcast-ku aanu ahayn casharro caadi ah, haddana waa hab aad u wanaagsan oo aad naftaada ugu baran karto tignoolajiyada cusub, maqal aragtida khubarada warshadaha, oo aad ku cusboonaysiin karto sifooyinkii ugu dambeeyay. Markaa, Podcast-ka Laravel waa kheyraadka Laravel ee si weyn loogu taliyay horumariyeyaasha heer kasta.
(Weligaa ma ku fikirtay inaad sameyso podcast? Fiiri hagahayaga qoto-dheer ee ku saabsan sida loo bilaabo podcast-kaaga ugu horreeya ee WordPress).
8 Fiidiyowyo, Sawir-qaadis, iyo Buugaagta Casharka Laravel ee ugu Lacag-san
1. Laracasts (Bilow, Dhexdhexaad, Sare)
Ma u baahan tahay martigelin-dhakhso leh, ammaan ah, iyo horumar-saaxiibtinimo martigelinta bogagga macmiilka? Behmaster waxaa la dhisay iyadoo maskaxda lagu hayo horumariyeyaasha WordPress oo bixiya qalab badan iyo dashboard awood leh. Eeg qorshayaashayada
shaashadaha waxaa loo qaabeeyey saddex siyaabood oo kala duwan (mawduucyo, taxane, safarro)
shaashado tayadoodu aad u sareyso (labadaba maqal iyo muuqaal)
sidoo kale waxay leeyihiin shaashado ku saabsan xirmooyinka Laravel ee caanka ah (Ergeyga, Forge, Nova, iwm) iyo aragti (mabaadi'da SOLID, qaababka naqshadeynta, iwm.)
madal dooda firfircoon (oo laga heli karo akoon madal bilaash ah)
ma jiro muddo tijaabo bilaash ah
Goorta la dooranayo Laracasts
Laracasts waa casharro muuqaal ah oo tayo sare leh, oo lagu taliyay heer kasta. In kasta oo ay tahay adeeg qaali ah, waxaad heli kartaa qaar taxane ah oo gebi ahaanba bilaash ah, tusaale ahaan, taxane dhexe oo ku saabsan Ergayga iyo taxanaha bilowga ah ee Forge. Si kastaba ha ahaatee, ma shaandhayn kartid koorsooyin bilaash ah, markaa waxaad u baahan doontaa inaad keligaa hesho.
Xataa haddii aanad doonayn inaad bixiso kharashka xubinnimada, waxa kale oo ay mudan tahay in aad iska diiwaan geliso koontada golaha ee bilaashka ah, gaar ahaan haddii aad u baahan tahay caawimo bulsho oo koodkaaga ah.
2. Laravel Daily (Bilow, Dhexdhexaad, Sare)
Laravel Daily waa goobta waxbarshada Laravel ee Povilas Korop, abuuraha kanaalka Youtube Business Laravel ee aan soo sheegnay. Povilas waxay halkan ku leedahay 10 lacag-bixineed iyo mid bilaash ah oo Laravel ah oo taxane ah oo fiidiyow ah, oo daboolaya mowduucyo xiiso leh sida abuurista abka samaynta qaansheegta ee Laravel, dhisida CRUD SPA oo leh Laravel iyo Vue, maaraynta codkarnimo, abuurista REST API oo leh Laravel, iyo in ka badan.
codeeynta tooska ah ee mashaariicda Laravel ee-dhabta ah
si wanaagsan loo diiwaangeliyey, nuxurka koorsada si macquul ah loo habeeyey
hal koorsada shilalka wax ku oolka ah ee bilaashka ah ee bilowga ah
Dhammaan tusaalooyinka koodka ayaa laga heli karaa GitHub
waxaad iska qori kartaa/ka bixin kartaa adigoo adeegsanaya madal wax lagu baran karo oo sugan
waxaad su'aalahaaga ugu diri kartaa Povilas iimayl ahaan
ma jirto taariikh daabacan oo ku saabsan koorsooyinka (inkasta oo aad ka qiyaasi karto taariikhda ballan-qaadka ee GitHub repo ee la xidhiidha)
Goorta la dooranayo Laravel maalin kasta
Laravel Daily waxa lagula taliyaa horumarinta Laravel heer kasta Haddii aad horeba uga mid ahayd macaamiisha kanaalka Ganacsiga Laravel oo aad jeceshahay habka wax-barid ee Povilas, koorsooyinkiisa fiidyaha ee lacagta lagu bixiyo ee Laravel Daily waxay noqon kartaa tallaabada xigta ee macquulka ah ee safarkaaga Laravel.
Sidoo kale waa doorasho aad u fiican haddii aad rabto inaad hesho xirfado baahi weyn loogu qabo suuqa shaqada, sida API ama SaaS horumarinta Laravel.
3. CodeCourse (Dhexe, Sare)
CodeCourse waa madal shaashad ah oo heersare ah oo loogu talagalay casharrada horumarinta shabakadda. Inta badan shaashadaha waxaa loo qaabeeyey sida 'Paths' waxaana lagu heli karaa afar qaybood: Flutter, Vue.js, Laravel, iyo qaababka naqshadaynta.
Dariiqa nadiifka ah ee Laravel wuxuu ka kooban yahay sagaal koorso oo muuqaal ah wuxuuna ku barayaa sida loo qoro koodka Laravel oo tayo sare leh oo nadiif ah. CodeCourse waxa kale oo ay leedahay waddo gaaban oo Laravel ah oo loo yaqaan Shaandhaynta Laravel. Wadooyinka ka sokow, CodeCourse wuxuu leeyahay hal koorso, sidoo kale, halkaas oo aad ku baran karto sida loo dhiso noocyo kala duwan oo abka ah Laravel, oo ay ku jiraan clone Twitter, degel kood ah, iyo goob ganacsi e-commerce ah.
wax cusub ayaa si joogto ah loogu daraa
macluumaad badan oo ku saabsan waddooyinka iyo koorsooyinka
shaashado tayo sare leh (labadaba muuqaal iyo maqal)
waxay diiradda saartaa xirfadaha gacanta
waxay soo bandhigaysaa muuqaalo gaaban oo loo yaqaan 'Snippets' oo bilaash ah
Fiidiyowyada hordhaca ah waxay diyaar ku yihiin bilaash
degel qaabaysan oo liidata (ma cadda inay leeyihiin noocyo kala duwan oo ka kooban yahay, koorsooyin keli ah ayaa laga heli karaa oo keliya liiska 'Library', 'Snippets' way adagtahay in la helo, iwm)
ma jiro tijaabo bilaash ah
Goorta la dooranayo CodeCourse
Si aad uga faa'iidaysato shaashadaha CodeCourse's Laravel, waxaad u baahan doontaa inaad barato aasaaska horumarka Laravel. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay aqoon dhexdhexaad ah oo ku saabsan qaabka ama aad horayba uga shaqeyneysay warshadaha, waxaad ku baran kartaa waxyaabo badan oo cusub halkan.
In kasta oo ay tahay adeeg khidmad ah, haddana qaali maaha, markaa haddii aad hesho kooras ama waddo aad xiisaynayso, waa maalgashi wanaagsan oo waqtigaaga iyo dadaalkaaga ah.
4. Dhisida API-yada iyo SPA-yada Laravel, Vue.js, iyo Capacitor (Advanced)
Dhisida API-yada iyo SPA-yada Laravel, Vue.js, iyo Capacitor
Hagaha kama dambaysta ah ee Dhismaha API-yada & Codsiyada Hal-bog ee Laravel, Vue.js, iyo Capacitor waa ebook uu qoray Dan Pastori iyo Jay Rogers, oo laga heli karo ServerSideUp. Waxay dabooshaa sida loo horumariyo codsiyada webka iyo mobaylka ee isla codebase-halkaasoo dhammaan abkaagu ay kula xiriiraan API-ga dhexe.
Buuggu waxa uu maraa habka loo dhisayo app-ka aduunka dhabta ah ee loo yaqaan Roast, codsiga guri kafeega. Ma aha demo kaliya ee waa app jira kaas oo kuu ogolaanaya inaad saxiixdo, ku darto kafateeriyada aad jeceshahay, ka hesho guryaha qaxwada ee khariidad, iyo in ka badan. Waxaad sidoo kale ku rakibi kartaa app-ka Roast aaladahaaga Android ama iOS.
waxaa qoray khubarada warshadaha
xog si fiican loo habeeyay (miiska nuxurku wuxuu ku yaal bogga iibka)
laba cutub oo bilaash ah (si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaan geliso wargeyska ServerSideUp si aad u hesho)
Habeebyada summada sawir-gacmeedka ee la habeeyay ee Capacitor
lagu heli karo saddex qaab oo kala duwan (PDF, EPUB, MOBI)
Helitaanka bulsho online gaar ah si aad u hesho caawimo (kaliya haddii aad iibsato xirmo ka qaalisan)
helitaanka nolosha oo dhan iyo updates
dhowr waxbarasho oo bilaash ah, heer sare ah oo Laravel ah oo ku yaal goobta ServerSideUp
casharro fiidiyoow ah oo dheeri ah (oo lagu xayeysiiyay qayb ka mid ah xirmada qaaliga ah) ayaa wali ku socda dhismaha
Goorta la dooranayo 'Dhismaha API-yada iyo SPA-yada Laravel, Vue.js, iyo Capacitor'
Haddii aad horeba u ahayd horumariye Laravel ah, ebook-kani waxa uu balaadhin karaa khibradaada oo waxa uu sii kordhin karaa aqoontaada. Waxay ku hagaysaa sida loo taageero saddex codebases (web, iOS, Android) marka la dhisayo codsi adag.
Waxa kale oo ay ku lammaane Laravel qalabka gees-goynta - qaabka Nuxt.js hore (oo lagu dhisay dusha Vue.js) iyo Capacitor cross-platform runtime (eeg dukumeentiyada). Intaa waxaa dheer, waxay dabooshaa Laravel 8, markaa hadda waa buuga Laravel ee ugu cusub ee laga heli karo suuqa (horta 380 bog iyo cutubyo cusub ayaa wali soo socda).
5. Barashada LinkedIn (Bilow, Dhexdhexaad)
Barashada LinkedIn, oo hore loogu yeeri jiray Lynda.com, waa madal waxbarasho e-e-learing ah oo qaali ah oo bixisa waddo waxbarasho oo dhammaystiran ee horumarinta Laravel.
Waxay ka kooban tahay shan koorso oo kala duwan, laga bilaabo (1) Laravel aasaasiga ah, ka dibna daboolaya (2) tijaabinta, amniga, iyo hawlgelinta, (3) RESTful API building, (4) Vue basics, iyo (5) isticmaalaya Vue.js iyo Laravel wada jir ahaan deegaan buuxa. Haddii aad dhammayso jidkan waxbarasho, waxaad yeelan doontaa aqoon kugu filan oo aad ku bilowdo shaqadaada sidii horumariye buuxa oo Laravel ah.
macalimiintu waa khubaro dhanka warshadaha ah (Justin Yost, Ray Villalobos, Michael Sullivan)
Muuqaalo tayo sare leh, xirfadle ah oo ay xisaabisay LinkedIn
si wanaagsan loo habeeyey, si sahlan loo dhex socon karo
waxaad kasban kartaa calaamada Linkedin ee dhamaystirka
hal bil oo tijaabo bilaash ah
apps mobile diyaar u ah Android iyo iOS
Koorasyadu waxay daboolayaan Laravel 5 iyo 6, markaa waxaa laga yaabaa inay ku jiraan macluumaadka dhacay meelaha qaarkood
Goorta la dooranayo Barashada LinkedIn
Haddii aad rabto inaad u shaqeyso sidii horumariye buuxa oo Laravel ah oo aadan haysan faylal badan, Waddada Laravel ee Barashada LinkedIn ayaa laga yaabaa inay kaa caawiso inaad shaqo hesho, maadaama aad ku muujin karto calaamadda dhammaystirka profile kaaga LinkedIn (eeg waxa ay dhab ahaan ka dhigan tahay) . Waxa kale oo ay noqon kartaa doorasho wanaagsan haddii aad rabto inaad sameyso koorsada dheer ee horumarinta Laravel buuxa, halkaas oo dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka ah mar horeba laguu soo ururiyey.
6. Udemy (Bilow, Dhexdhexaad, Sare)
Udemy waa goob suuq-waxbarasho oo caalami ah halkaas oo abuuryaasha madax-bannaani ay iibinayaan koorsooyinkooda fiidiyowga, maaha oo keliya horumarinta shabakadda laakiin sidoo kale maaddooyin kale oo badan.
Mawduuca Laravel hadda waxa ku jira 280 koorso oo ah dhammaan heerarka aqoonta. Interface-ka Udemy wuxuu ku siinayaa shaandhooyin kala duwan oo kala duwan, sida qiimaha, qiimaynta, muddada, heerka, iyo in ka badan, si ay kaaga caawiyaan sidii aad u heli lahayd casharrada Laravel ugu fiican. Ingiriisiga ka sokow, waxay sidoo kale bixisaa koorsooyin luqado kale ah.
macluumaad badan oo ku saabsan koorsooyinka
xulasho aad u ballaaran oo ah koorsooyinka Laravel
hoos-hoosaadyo ku qoran luqado kala duwan (waxay kuxirantahay koorsada)
Dammaanad lacageed oo dhan 30-day
tayada muuqaalka iyo maqalku way kala duwan yihiin, maadaama koorasyada ay soo galiyaan qoraayaasha indie
Goorta la dooranayo Udemy
Sida Udemy ay bixiso ku dhawaad ​​​​300 oo taxane fiidiyoow ah oo tababbarka Laravel, waxaad u baahan tahay inaad waqti iyo dadaal geliso si aad u hesho waxaad u baahan tahay. Way mudan tahay in fiiro gaar ah loo yeesho calaamadaha 'iibiyaha ugu fiican', 'cusub', iyo 'kulul & kuwa cusub', inkastoo aadan sifeyn karin sifooyinkan.
Ha iloobin inaad akhrido dib u eegista ardayda oo aad daawato horudhacyada, maadaama Udemy aanu ahayn goob dhexe oo leh habraac tayo heersare ah. Haddii aad gasho tufaax xun, waxaad weli dib u heli kartaa lacagtaada adigoo isticmaalaya dammaanadda lacag celinta ee 30-maalmood.
7. Wadaaga xirfadaha (Bilow, Dhexdhexaad)
Skillshare waa suuq kale oo e-waxbarasho ah oo la mid ah Udemy, si kastaba ha ahaatee, waxay isticmaashaa qaab qiimeed oo kala duwan. Halkan, ma bixinaysid koorasyada gaarka ah, laakiin waxaa lagugu soo dalacayaa lacag bille ah oo aad ku heli karto dhammaan koorsooyinka Skillshare.
Hadda, Skillshare waxa ay taxdaa 22 kooras muuqaal ah oo Laravel ah oo ay abuureen macalimiin madax-bannaan - si kastaba ha ahaatee, ogow in koorsooyinka PHP qaarkood ay sidoo kale ku qoran yihiin 'Koorsada Laravel' sabab qaar.
Inta badan koorasyada Skillshare's Laravel waxay diiradda saaraan xirfadaha la taaban karo, sida dhisidda degel miisaaniyad shakhsiyeed, app todo, filter liiska boostada, guddi maamul jadwaleeyaha hawsha, iyo kuwo kale oo yar.
interface si fudud loo maro
shaqaynta qoraal-qaadashada ku dhex dhisan
fiidiyowyadu waa lagu xardhay (Ingiriis)
apps mobile diyaar u ah iOS iyo Android
7-maalmood oo tijaabo bilaash ah (faahfaahinta kaadhka deynta ayaa loo baahan yahay)
Waa inaad is-diiwaangelisaa si aad u aragto qorshayaasha qiimaha
tayada muuqaalku way kala duwan tahay koorsooyinka
wax tariikhda lagu daabaco ma jiro koorsooyinka (inkasta oo aad shaandhayn karto koorsooyinka 'lagu abuuray sanadkan')
Goorta la dooranayo Skillshare
In kasta oo horumarka Laravel aanu ahayn diiradda ugu weyn ee Skillshare, waxaad halkan ka heli kartaa qaar wanaagsan oo koorsooyin heer-sare ah. Haddii aad hore u lahayd xubin-nimada Skillshare, waxa kale oo mudan in aad eegto fiidiyowyada wax-barashada ee Laravel.
Haddii kale, haddii aad ku cusub tahay Skillshare, laakiin aad xiisaynayso mowduucyo kale oo ay baranayaan (waxaa jira waxyaabo badan oo aan ka ahayn horumarinta shabakadda, sawir qaadis ilaa muusig ilaa qoraal hal abuur leh), waxay sidoo kale noqon kartaa fikrad wanaagsan inaad iska diiwaan geliso xubinnimada.
8. Eduonix (Bilow, Dhexdhexaad)
Eduonix waa goob wax lagu barto onlaynka ah oo leh macalimiin madax banaan, oo la mid ah Udemy iyo Skillshare. Waxay isticmaashaa moodalkii qiimaha sida Udemy, si aad u bixiso kooras kasta si gaar ah (si kastaba ha ahaatee, waxay haysataa ikhtiyaarka xubinnimada nolosha dhammaan koorsooyinka Eduonix iyo qaar ka mid ah qiimo dhimis xirmo sidoo kale).
Waqtigan xaadirka ah, waxay bixisaa 16 koorasyo ​​fiidiyoow ah oo Laravel ah, kuwaas oo intooda badan kugu hagaya mashruuc gacmeed, sida abuurista app huteel oo lagu turjumay afar luqadood, codsi madasha hal bog ah, abka maamulaha xidhiidhka oo leh gees hore oo Vue ah (kan waxay ku jirtaa koorsada 'Barro Dhismaha Laravel 10 Mashruuc'), iyo kuwo kale.
macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan nuxurka koorsada (ay ku jirto markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay)
mashaariicda dhabta ah
nidaamka shaandhaynta horumarsan
tayada muuqaalka iyo maqalku way ku kala duwan yihiin koorsooyinka
muuqaal iyo dareen goobta coupon jaban
Goorta la dooranayo Eduonix
Eduonix waxay kuu noqon kartaa doorasho wanaagsan haddii aad aad u xiisaynayso dhisidda abka gacanta marka loo eego aragtida. In kasta oo ayan bixin koorasyo ​​badan oo ku saabsan horumarinta Laravel, waxaa habboon in isha lagu hayo, gaar ahaan sababtoo ah abuurayaasha qaarkood waxay iibiyaan koorsooyinkooda Udemy iyo Eduonix labadaba, laakiin leh qiime ka duwan (sida caadiga ah Eduonix waa kan ka jaban).
Diyaar ma u tahay inaad quusto Laravel?Riix halkan Tweet
Dejinta yoolka waxbarasho si aad u ogaato meesha aad u socoto waxay wax badan kaa caawin kartaa inaad naftaada u hesho casharka Laravel ugu fiican. Haddii aad waayo-aragnimo hore u leedahay barashada tooska ah ee internetka, waxaad hore u garanaysay nooca agabka aad door bidayso: casharrada qoraalka ku salaysan, fiidyowyada, shaashadaha, podcasts, blogs, ama buugaag dheer.
Khasab maaha inaad ku bilowdo hal cashar oo Laravel ah, laakiin sidoo kale waxaad dooran kartaa hab isku dhafan. Tusaale ahaan, waxaad ku bilaabi kartaa koorsada fiidyowga marka aad iska diiwaangelineyso warside, dhageyso podcast, iyo akhrinta blog isku mar.
Haddii aadan hubin xirfadaha aad u baahan doonto, waxay noqon kartaa fikrad wanaagsan inaad baadho goobaha shaqada sida LaraJobs si aad u aragto waxa suuqa looga baahan yahay (tani waxay isbedeli kartaa wakhti).
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa abka qorshaynta mashruuca sida Trello ama mid ka mid ah beddelkiisa si aad ula socoto horumarkaaga, u dejiso waqtiyada kama dambaysta ah iyo xusuusinta, oo aad sii wado dhiirigelinta naftaada adoo raacaya qorshahaaga waxbarasho.
Haddii aad dooratid casharrada Laravel ee lacag bixinta ah, inta badan way fiican tahay inaad ku bilowdo is-diiwaangelinta billaha ah intii aad bixin lahayd hal sano ka hor, ilaa aad ka ogaanayso waxaad filan karto (xitaa haddii kharashka bishii uu ka yar yahay is-diiwaangelinta sannadlaha ah).
Ugu dambeyntii, billow inaad dhisto barnaamijka Laravel ee shaqeeya sida ugu dhaqsaha badan ee habka waxbarashada. Markaad aragto inaad awooday inaad fuliso mashruuc-dhabta ah waxay kaa caawin kartaa inaad sii wadato waxbarashada oo aad gaadho yoolalkaaga.
'Darajooyinka Saameynta Saameynta Da'da' (iyo 8 kale oo khuraafaad ah SEO)